भयो यस्तो हंगामा विमानस्थलमा एयर होस्टेसको कपडा खोलिदिएपछि ! भिडियोसहित - Taja Report
Homeसमाचारभयो यस्तो हंगामा विमानस्थलमा एयर होस्टेसको कपडा खोलिदिएपछि ! भिडियोसहित
भयो यस्तो हंगामा विमानस्थलमा एयर होस्टेसको कपडा खोलिदिएपछि ! भिडियोसहित
July 12, 2018 समाचार Comments Off on भयो यस्तो हंगामा विमानस्थलमा एयर होस्टेसको कपडा खोलिदिएपछि ! भिडियोसहित
एजेन्सी। विमानस्थलमा एयरहोस्टेसलाई कपडा खोल्न लगाएपछि हंगामा भएको छ । स्पाइसजेट एयरलाइन्सकी एक एयर होस्टेसले एयरलाइन्सले आफ्नो कपडा खोलेर तलाशी लिएको आरोप लगाएकी छिन् । यसबाट रिसाएकी ती एयरहोस्टेसको एउटा भिडियो पनि भाइरल भइरहेको छ । यो भिडियो केही दिन अघि चेन्नइ विमानस्थलमा खिचिएको बताइएको छ । स्पाइसजेटले भने आरोप स्वीकार गरेको छैन ।
समाचारमा जनाइएअनुसार फ्लाइट चेन्नइ पुगेपछि आफूलाई सुरक्षाकर्मीले कपडा खोलेर तलाशी लिएको ती एयरहोस्टेसले आरोप लगाएकी छिन् । अफिसरहरुलाई ती एयरहोस्टेसले फ्लाइटमा बेचिएका खाना र अन्य सामानबाट केही पैसा लुकाएको शंका लागेपछि यसरी तलाशी लिइएको बताइएको छ । एयरलाइन्सले भने २८ र २९ मार्चमा कर्मचारीको नियमित जाँच गरिएको र कपडा खोलिएको कुरा झुटो भएको बताएको छ ।
स्पाइसजेटका प्रवक्ताले भने तलाशीको उद्देश्य कम्पनीको पैसा र सामान चोरी तथा तस्करीमा संलग्न कर्मचारी पत्ता लगाउनु रहेको बताएका छन् । यसले यात्रु, कर्मचारी र एयरलाइन्सका सामानको सुरक्षा हुने उनले बताए । यसमा कुनै गैरकानुनी काम नगरिएको र केही चोरीका घटना पाइएको उनले बताएका छन् ।एजेन्सी। विमानस्थलमा एयरहोस्टेसलाई कपडा खोल्न लगाएपछि हंगामा भएको छ । स्पाइसजेट एयरलाइन्सकी एक एयरहोस्टेसले एयरलाइन्सले आफ्नो कपडा खोलेर तलाशी लिएको आरोप लगाएकी छिन् । यसबाट रिसाएकी ती एयरहोस्टेसको एउटा भिडियो पनि भाइरल भइरहेको छ । यो भिडियो केही दिन अघि चेन्नइ विमानस्थलमा खिचिएको बताइएको छ । स्पाइसजेटले भने आरोप स्वीकार गरेको छैन ।
स्पाइसजेटका प्रवक्ताले भने तलाशीको उद्देश्य कम्पनीको पैसा र सामान चोरी तथा तस्करीमा संलग्न कर्मचारी पत्ता लगाउनु रहेको बताएका छन् । यसले यात्रु, कर्मचारी र एयरलाइन्सका सामानको सुरक्षा हुने उनले बताए । यसमा कुनै गैरकानुनी काम नगरिएको र केही चोरीका घटना पाइएको उनले बताएका छन् ।
फेसबुक लाइभ गरेर आत्महत्या गरे यी युवाले ! ६ पन्ना लामो सुसाइड नोट समेत लेखे, आमा बाबु मलाई माफ गरिदेउ ! (लाइभ भिडियो)